ATAL BIHARI VAJPAYEE အသက်, သေခြင်း, ဇာတ်, အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဇနီး, ကလေးများ, မိသားစု & အခြား - နိုင်ငံရေးသမား
Atal Bihari Vajpayee အသက်, သေခြင်း, ဇာတ်, အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ဇနီး, ကလေးများ, မိသားစု & အခြား
အမည်ပြောင် Atal Ji, Baap Ji
အလုပ်အကိုင် နိုင်ငံရေးသမား, ပြည်နယ်, ကဗျာဆရာ, စာရေးသူ
နိုင်ငံရေးခရီး ၁၉၅၁ Bharatiya Jana Sangh (အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသောဟိန္ဒူလက်ယာနိုင်ငံရေးပါတီ) သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းဒေသ၏အမျိုးသားအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။
၁၉၅၇ Uttar Pradesh ရှိ Mathura မှ Lok Sabha ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး Raja Mahendra Pratap ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည် Uttar Pradesh ရှိ Balrampur မှပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် Lok Sabha တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။
၁၉၆၈ Jana Sangh ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာသည်။
1977: Morarji Desai ဝန်ကြီးအဖွဲ့တွင်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဖြစ်လာသည်။
၁၉၈၀ Bharatiya Janata ပါတီ (BJP) ကိုသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူတည်ထောင်ခဲ့ပြီး၎င်း၏ပထမဆုံးအမျိုးသားသမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။
ကိုးကိုးဆယ်ကိုး မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်သူသည်အိန္ဒိယ၏ ၁၀ ယောက်မြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာသည်။
၁၉၉၈ မတ် ၁၉ ရက်မှ ၂၀၀၄ မေလ ၂၂ ရက်အထိ နောက်တဖန်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
မွေးနေ့ 25 ဒီဇင်ဘာလ 1924
မွေးရပ်မြေ Gwalior ပြည်နယ်၊ ဗြိတိသျှအိန္ဒိယ (ယခု၊ Madhya Pradesh, အိန္ဒိယ)
သေနေ့ 16 သြဂုတ်လ 2018
သေမင်း၏နေရာ AIIMS, နယူးဒေလီ
မီးသင်္ဂြိုဟ်ရာနေရာနှင့်အနားယူရာနေရာ နယူးဒေလီ၊ Rajghat အနီးရှိ Rashtriya Smriti Sthal
အသက် (သေသည့်အချိန်) ၉၃ နှစ်
ဇာတိမြို့ Gwalior, Madhya Pradesh, အိန္ဒိယ (သူ့ဘိုးဘွားကျေးရွာသည်အတ်တာပရာဒေ့ရ်ပြည်နယ်၊ အဂ်ရာရှိ)
ကျောင်း အစိုးရအဆင့်မြင့်အလယ်တန်းကျောင်း၊ Gorkhi, Bara, Gwalior
ကောလိပ် (များ) / တက္ကသိုလ် ဗစ်တိုးရီးယားကောလိပ် (ယခု၊ Laxmi Bai College)၊ Gwalior၊ Madhya Pradesh, India
Dayanand Anglo-Vedic (DAV) ကောလိပ်၊ Kanpur၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Uttar Pradesh ပြည်နယ်
ပညာရေးဆိုင်ရာအရည်အချင်းများ Gwalior ၏ Victoria College (ယခု၊ Laxmi Bai College) မှဟိန္ဒူ၊ အင်္ဂလိပ်နှင့်သက္ကတဘာသာတို့ဖြင့်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။
Dayanand Anglo-Vedic College, Kanpur မှနိုင်ငံရေးသိပ္ပံမှ M.A.
လိပ်စာ (သေသည့်အချိန်) 6-A, Krishna ဟိန္ဒူ Menon Marg, နယူးဒေလီ - 110011
ဝါသနာ ကဗျာရေးခြင်း၊ ချက်ပြုတ်ခြင်း၊ အိန္ဒိယဂီတကိုနားထောင်ခြင်း၊ စာဖတ်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားခြင်း
ဆုများ, ဂုဏ်ထူး, အောင်မြင်မှုများ 1992: Padma Vibhushan (အိန္ဒိယတွင်ဒုတိယမြောက်အမြင့်ဆုံးအရပ်သားဆု) ဖြင့်ချီးမြှင့်ခံရ
၂၀၁၅ Bharat Ratna (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အမြင့်ဆုံးအရပ်သားဆု) ဖြင့်ချီးမြှင့်ခံရ
အငြင်းပွားမှုများ • ၁၉၇၅ တွင်သူသည်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မှပြဌာန်းခဲ့သောအရေးပေါ်အခြေအနေအတွင်းအခြားခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူအဖမ်းခံခဲ့ရသည် Indira ဂန္ဒီ ။
Uttar Pradesh ရှိ Ayodhya ရှိ Babri ဗလီအားဖြိုဖျက်မှုအတွက်လူထုအားလှုံ့ဆော်ရန်သူအားဝေဖန်ခဲ့သည်။
Affair / Girlfriend Rajkumari Kaul (၂၀၁၄ ခုနှစ်မေလတွင်သေဆုံးခဲ့သည်)
သမီး - Namita Bhattacharya (Foster)
မြေး - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်
သားမက် - Ranjan Bhattacharya (စီးပွားရေးသမား၊ ဗျူရိုကရက်)
မိဘများ ဖခင် Krishna Bihari Vajpayee (ကဗျာဆရာနှင့်ကျောင်းဆရာ)
အမေ - ခရစ္စနားဒေဝီ (အိမ်ဆောက်လုပ်သူ)
မောင်နှမများ ညီအစ်ကိုတို့ - Avadh Bihari Vajpayee (Madhya Pradesh အစိုးရလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး)၊ Prem Bihari Vajpayee (ပြည်နယ်သမဝါယမဌာနတွင်အလုပ်လုပ်သည်) Suda Bihari Vajpayee (စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်သည်)
ညီအစ်မများ - Urmila Mishra (Homemaker)၊ Vimala Mishra (Homemaker)၊ Kamala Devi (Homemaker)
နိုင်ငံရေးသမား Syama Prasad Mukherjee, P. V. Narasimha Rao က
ခေါင်းဆောင် (များ) Mohandas Karamchand Gandhi (မဟတ္တမဂန္ဒီ) , Jawaharlal နေရူး
စာရေးသူ Sarat Chandra Chattopadhyay, Premchand
ကဗျာဆရာ Harivansh rai bachchan Ramnath Awasthi ဒေါက်တာ Shiv Mangal Singh Suman၊ Surya Kanth Tripathi 'Nirala'၊ Bal Krishna Sharma Naveen၊ Jagannath Prasad Milind နှင့် Faiz Ahmed Faiz
အနုပညာရှင် (များ) Bhim Sen Joshi၊ Amjad Ali Khan နှင့် Hariprasad Chaurasia
ပြန်လည်ပြသရန်အဆိုတော် (များ) Lata Mangeshkar , Mukesh နှင့် S.D. ဗမာ
ဂီတပညာရှင် Sachin Dev Burman (အက်စ်ဒီဘာမန်)
သရုပ်ဆောင် (များ) Sanjeev Kumar က, Dilip Kumar
မင်းသမီး Suchitra Sen, ရက်ခ် နှင့်နူတန်၊ Hema Malini
သီချင်း (များ) S.D. အားဖြင့် 'အိုမျှသာ Majhi', 'နေရောင်မျှသာ bandhu ပြန်လည်' Mukesh နှင့် Lata တို့၏ဗမာနှင့်ကူဘီ၊
ရုပ်ရှင်များ) ဘောလီးဝုဒ် - Devdas (1955), Bandini (1963), Teesri Kasam (1966), Mausam (1975), Mamta (1966) နှင့် Aandhi (1975)
ဟောလိဝုဒ် - ကွိုင်မြစ်ပေါ်ရှိတံတား (၁၉၅၇)၊ လွတ်လပ်စွာမွေးဖွား (၁၉၆၆) နှင့်ဂန္ဒီ (၁၉၈၂)
ဦး တည်ရာ မနာလီ (Himachal Pradesh, အိန္ဒိယ)
အစားအစာများ တရုတ်အစားအစာများ၊ ပုစွန်များ၊ Mungode များ၊ Gajar Ka Halwa၊ Alwar Milk Cake, Khichdi, Poori-Kachori၊
ကားစုဆောင်းခြင်း သံအမတ်ကြီး (မော်ဒယ် ၁၉၈၇)
ပိုင်ဆိုင်မှုများ / Properties ကို နယူးဒေလီ၊ East Kailash ရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်း (၁၅၀.၃၂ စတုရန်းမိုင်၊ တန်ဖိုးမှာ₹ ၂၂ သိန်း)
Gwalior ရှိအဖေတစ် ဦး ၏အိမ် (၁၈၀၀ စတုရန်းပေ၊ worth ၆ သိန်းတန်တန်ဖိုးရှိ)
လစာ / ပင်စင် (ခန့်မှန်း) တစ်သက်တာငှားခအခမဲ့တည်းခိုနေထိုင်နိုင်ရေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ၊ အတွင်းရေးမှူး ၁၄ ဦး၊ ပြည်တွင်းအလုပ်အမှုဆောင်အဆင့်လေယာဉ်လက်မှတ်ခြောက်စီး၊ ရထားခရီးသွားလာအကန့်အသတ်မရှိ၊ ငါးနှစ်တာအသုံးစရိတ်နှင့်ရုံးအသုံးစရိတ်များ၊ SPG သည်တစ်နှစ်ဖြစ်သည်။ ငါးနှစ်ပြီးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်ထောက်တစ် ဦး၊ လေယာဉ်နှင့်ရထားခရီးစရိတ်၊ ရုံးအသုံးစရိတ်များအတွက်₹ ၆၀၀၀ ။
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ₹သိန်း ၆၀ (၂၀၀၄ တွင်ကဲ့သို့)
Atal Bihari Vajpayee နှင့်ပတ်သက်သောလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Atal Bihari Vajpayee သည်ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့သလား
Atal Bihari Vajpayee သည်အရက်ကိုသောက်ခဲ့ပါသလား
သူသည်ခရစ်စမတ်နေ့တွင်ဗြိတိသျှအိန္ဒိယ Gwalior ပြည်နယ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Atal Bihari Vajpayee ကလေးဘဝဓာတ်ပုံ
သူ၏ဘိုးဘွားပိုင်ကျေးရွာဖြစ်သည့် Uttar Pradesh ရှိ Agra ခရိုင်ရှိ Bateshwar နှင့်သူ၏အဘိုး Pandit Shyam Lal Vajpayee တို့သည် Bateshwar မှ Madhya Pradesh ရှိ Morena သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
သူသည်သူ၏ဖခင် Krishna Bihari သည် ၁၉၃၅ မှ ၁၉၃၇ ခုနှစ်အထိကျောင်းအုပ်ကြီး Gorkhi၊ Maharaja Bara, Gwalior မှရရှိခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်သည်ကျောင်းစစ်ဆေးရေးမှူးအဖြစ်ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပြီးဒါရိုက်တာဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်သည်ကျောင်းဆုတောင်းချက်ကိုရေးသားခဲ့သည်ဟုလည်းလူသိများသည်။
Gwalior ရှိ Atal Bihari Vajpayee ၏ကျောင်း
သူသည် Kanpur ရှိ DAV College မှပထမတန်းစားနိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘွဲ့လွန်ဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့သည်။
သူ၏လှုပ်ရှားမှုကို Gwalior မှ Arya Kumar Sabha နှင့်စတင်ခဲ့သည်။
Babasaheb Apte ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူသည် ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ တွင်၎င်း၏အချိန်ပြည့်အလုပ်သမား (နည်းပညာပိုင်းအရ Pracharak) ဖြစ်လာခဲ့သည်။
RSS အလုပ်ရုံသို့တက်ရောက်ခြင်း Atal Bihari Vajpayee
RSS သို့မ ၀ င်ခင် Atal သည်ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံခဲ့ရသည်။
Law ကိုလေ့လာနေစဉ်က Kanpur ရှိ DAV ကောလိပ်တွင်သူနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့သည်။
သူက partition အဓိကရုဏ်းကြောင့်သူ၏ဥပဒေလေ့လာမှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည်။
သူသည် Uttar Pradesh သို့ Vistarak (Probationary Pracharak) အနေဖြင့်ပို့ခဲ့ပြီး Deendayal Upadhyaya ၏သတင်းစာ Panchjanya (ဟိန္ဒူအပတ်စဉ်)၊ Rashtradharma (ဟိန္ဒူလစဉ်) နှင့်နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများ Veer Arjun & Swadesh တို့အတွက်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
သူ၏အငယ်သောနေ့ရက်များတွင် Atal Bihari Vajpayee
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင်သူသည်အစ်ကိုဖြစ်သူပရီနှင့်အတူ ၂၃ ရက်ကြာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ Quit India Movement တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
သူသည် Bhartiya Jana Sangh တည်ထောင်သူ Shyama Prasad Mukherjee ကိုအားတက်သရောထောက်ခံခဲ့ပြီး ၁၉၅၃ တွင်ပါမစ်တင်ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည့်အနေဖြင့်သူသည်အလျင်အမြန်သေဆုံးနိုင်ခဲ့သည်။ ကက်ရှမီးယားသို့သွားရန် Mukherjee သည်ဆန္ဒပြစဉ်အတွင်းသေဆုံးခဲ့ပြီး Vajpayee လူငယ်အားချိုးဖဲ့ခဲ့သည်။
Atal Bihari Vajpayee ရဲ့နိုင်ငံရေး Guru Shyama Prasad Mukherjee
၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် Uttar Pradesh ရှိ Balrampur မဲဆန္ဒနယ်မှဒုတိယအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် Atal အား Lok Sabha တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည်။
Atal Bihari Vajpayee သည်တစ် ဦး တည်းဆန္ဒပြပွဲကိုပြောကြားခြင်း
Atal Bihari Vajpayee သည်ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိသူ၏အပြောအဆိုကြောင့်လူသိများခဲ့ပြီး ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် Lok Sabha တွင်ပြုလုပ်သောအဖွင့်မိန့်ခွန်းတွင်သူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၀ န်ကြီးချုပ်ဂျဝါဟာလာနေရူးအပါအဝင်ဝါရင့်ပါလီမန်အမတ်များစွာမှဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုရရှိခဲ့သည်။ လူသည်အိန္ဒိယ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ”
၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကွန်ဂရက်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးဗဟိုတွင်အစိုးရသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဤအစိုးရသစ်တွင် Atal Bihari သည်နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဖြစ်လာပြီး ၁၉၇၇ ခုနှစ်Southပြီလတွင်သူသည် South Block ရှိသူ၏ရုံးခန်းသို့ ၀ င်ရောက်သော် Jawaharlal နေရူး၏ပုံတူပျောက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးထိုတွင်ရှိဝန်ထမ်းများအား“ ငါလိုချင်တယ် ပြန်လာပြီ
၁၉၇၇ တွင် Atal Bihari Vajpayee သည်ကုလသမဂ္ဂအားဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ပထမဆုံးပြောဆိုသူဖြစ်လာခဲ့သည်။
Atal Bihari Vajpayee သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏အအောင်မြင်ဆုံးပြည်ပရေးရာ ၀ န်ကြီးများထဲမှတစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်ပြီး၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းသူသည်ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုများစွာရရှိခဲ့ပြီးအရေးကြီးသောညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုစဉ်ကအမေရိကန်သမ္မတဂျင်မီကာတာသည်အိန်ဒိယ၏ပြင်ပရေးရာ ၀ န်ကြီးဖြစ်ချိန် ၁၉၇၈ တွင်အိန္ဒိယသို့အလည်အပတ်ခရီးခဲ့သည်။
ဂျင်မီကာတာနှင့် Atal Bihari Vajpayee
သူ၏နိုင်ငံရေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်သူ၌လေးလေးနက်နက်အဂတိလိုက်စားမှုမရှိခဲ့ပါ။ Uttar Pradesh ရှိ Ayodhya ရှိ Babri ဗလီအားဖြိုဖျက်ရန်အတွက်လူအုပ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့သည့်အတွက်သူအားပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် Babri Masjid ကိုဖြိုချခြင်းမတိုင်မီရက်အနည်းငယ်တွင်သူပြောခဲ့သောထိုမိန့်ခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗီဒီယိုတစ်ခုလည်းပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
၁၉၉၆ ခုနှစ်မေလ ၁၆ ရက်နေ့တွင်သူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ၁၀ ကြိမ်မြောက် ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး ၁၃ ရက်သာကြာခဲ့သည်။ ထို့နောက် 1998 ခုနှစ်တွင် 13 လကြာ; နောက်တဖန် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် ၅ နှစ်သက်တမ်းပြည့်သည်။ သူသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ကွန်ဂရက်မဟုတ်သော ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည်။ သူသည်အစိုးရအား ၅ နှစ်သက်တမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၀ န်ကြီးချုပ်ရုံးတွင် Atal Bihari Vajpayee
Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည့် download, Mahesh babu ရုပ်ရှင်စာရင်း
၁၉၉၈ ခုနှစ်မေလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် Rajasthan ရှိ Pokhran ၌နျူကလီးယားစမ်းသပ်မှုအပြီးတွင် Shakti စစ်ဆင်ရေးအပြီးတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကမ္ဘာ့အထက်တန်းလွှာအဏုမြူအသင်း၏အသင်းချုပ်တွင်နေရာချခဲ့သည်။
Pokhran စမ်းသပ်မှုမှာ Atal Bihari Vajpayee
၁၉၉၉ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင်ပါကစ္စတန်နှင့်ခိုင်မာသောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်ပါကစ္စတန်ရှိလာဟိုးသို့ဘတ်စ်ကားစီးခဲ့သည်။
Atal Bihari Vajpayee လာဟိုးဘတ်စ်ကားခရီး
၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်သူသည်ဒူးဖြင့်အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးမွန်ဘိုင်းရှိ Breach Candy ဆေးရုံတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင်သူသည်လေဖြတ်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်။
Atal Bihari Vajpayee ကျန်းမာရေးယိုယွင်းပျက်စီး
aishwarya ရိုင်အတ္ထုပ္ပတ္တိ Salman khan
၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့တွင်ဒေလီရှိမက်ထရို၏ပထမအပိုင်းကိုဖွင့်လှစ်စဉ်တွင်သူသည်မက်ထရိုရထားဖြင့်ခရီးထွက်ရန်လက်မှတ်ဝယ်ခဲ့သည်။ သူလည်းဒေလီမက်ထရို၏ပထမဆုံးခရီးသည်ဖြစ်လာသည်။
Atal Bihari Vajpayee ဒေလီတွင် Metro Ticket တစ်ခုကို ၀ ယ်သည်
သတင်းများအရ Atal Bihari Vajpayee နှင့် Gwalior ရှိသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Rajkumari Kaul တို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ခံစားချက်ရှိကြသည်။ တစ်ချိန်ကသူသည်သူမထံစာတစ်စောင်ရေးပြီးကောလိပ်စာကြည့်တိုက်၌စာအုပ်ထည့်လိုက်သည်၊ သို့သော်သူသည် Rajkumari Kaul ထံမှပြန်ကြားချက်မရခဲ့ပါ။ သို့သော် Atal ရဲ့ဘဝခရီး၏ဤအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအများပြည်သူဆွေးနွေးမှုများထဲကဖြစ်ခဲ့သည်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်သူသည်သူ၏ကိစ္စများကိုငြင်းပယ်ခြင်းလည်းမပြုပါ။
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း P. V. Narasimha Rao သည် Atal Bihari Vajpayee နှင့်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဖြစ်သည်။
Narasimha Rao နှင့်အတူ Atal Bihari Vajpayee
သူသည်ပြည်နယ် ၄ ခုမှ Uttar Pradesh၊ Madhya Pradesh, Delhi နှင့် Gujarat တို့တွင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံခဲ့ရသည့်တစ်ခုတည်းသောပါလီမန်အမတ်ဖြစ်သည်။
သူသည်အိန္ဒိယ၏အကောင်းဆုံးသောကဗျာဆရာတစ် ဦး လည်းဖြစ်သည်။ သူသည်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ကဗျာများစွာကိုရေးသားခဲ့သည်။
သူ၏ကဗျာများကိုဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်းအသုံးပြုခဲ့ပြီး Lata Mangeshkar နှင့် Jagjit Singh က သူ၏ကဗျာအချို့ကိုအသံထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
သူသည်ပါလီမန်အမတ်အဖြစ် ၄၇ နှစ်ကြာခဲ့သည် (Rajya Sabha မှ ၂ ကြိမ်နှင့် Lok Sabha မှ ၁၁ ကြိမ်) ။
လစ်ဘရယ်နိုင်ငံရေးသမားတစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းအပြင်၊ တိရစ္ဆာန်များအပေါ်လည်းအလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာခဲ့သည်။
Atal Bihari Bajpayee သည်ခွေးနှင့်ကစားခြင်း
ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက် ၂၀၁၈ တွင် Atal Bihari ၏ ၉၄ နှစ်မြောက်မွေးနေ့မတိုင်မှီ ၀ န်ကြီးချုပ်ဖြစ်သည် Narendra မိုဒီ သူ့ကို၏မှတ်ဉာဏ်အတွက်₹ 100 ဒင်္ဂါးပြားဖြန့်ချိ။
Atal Bihari Vajpayee ကိုဂုဏ်ပြုသည့်အတွက်ရူပီး ၁၀၀ ရူပီး
နာတာရှည်ရောဂါခံစားပြီးနောက်သူသည်ဤလောကကိုထာဝရသြဂုတ်လ ၁၆ ရက် ၂၀၁၈ တွင်ထားခဲ့သည်။
AIIMS မှထုတ်ဝေသည် Atal Bihari Vajpayee သေခြင်းတရားသတင်းလွှာ
Atal Bihari Vajpayee ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိအကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူမယခုဘယ်မှာ mamie ahuja
meira kumar ၏ manjul kumar ခင်ပွန်း
ခရစ်ယာန် Bale အမြင့်နှင့်အလေးချိန်
Salman Khan ၏အမှန်တကယ်အမြင့်ကဘာလဲ
pinjra khubsurti ka ကြယ်သွန်း
ketaki mategaonkar မွေးနေ့